11/05/2018 - Page 2 sur 3 -
Fandrobana tany Ambatofotsy : Jiolahy iray maty nosavoritahan’ny olona
11/05/2018 admintriatra 0
Roalahy no fantatra fa tra-tehaky ny fokonolona teny am-piomanana ny handositra, rehefa naharaisana fampandrenesana avy namaky trano. Raha ny loharanom-baovao voaray tamin’izany dia tokantrano iray tao amin’ny tanànan’Ambatofotsy no norobain’ ireto olon-dratsy. Izay ny alin’ny …Tohiny
Famonoana sinoa tany Ambalavao : Olona 04 voasambotry ny polisy
Rehefa nandeha ny fanadihadiana sy ny fikarohana nandritra ny herinandro teo ho eo, dia fantatra fa voasambotry ny polisy ny alatsinainy 07 mey lasa teo ireo olona efatra , tompon’antoka tamin’ny famonoana ilay lehilahy teratany …Tohiny
Fahatrarana rongony tany Ihosy : Miaramila telo hiakatra fampanoavana anio
Taorian’ny fihainoana azy ireo teo anatrehan’ny mpitandro filaminana, dia atolotra ny fampanoavana anio any Ihosy ireo miaramila miisa telo sy sivily efatra nahatrarana rongony zato gony tany an-toerana ny talata tolakandro lasa teo. Raha tsiahivina …Tohiny
Vavaka sy hira : Nampihetsi-po sy nanainga fanahy ny sehon’i Rija Rasolondraibe
Mpanakanto amin’ny hira fiderana manana ny lazany any ivelany. Mandalo an-tanindrazana ary nisantatra ireo seho maromaro ataony i Rija Rasolondraibe, omaly. « Ao ary Tsika e ! » no lohatenin’ny fampisehoana entiny izay nosantarina tetsy …Tohiny
Rajaonarimampianina- Rajoelina:SAMY HAFA TANTERAKA
Trafikana andramena – sambo “Lumina” : Voarohirohy 13 nidoboka eny Tsiafahy